Samsung Galaxy S10 | Androidsis
Samsung Galaxy S10 hadda waa rasmi: wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku ogaato fiidiyoow
Maalin ay dad badani filayeen, gaar ahaan taageerayaasha daacadda u ah shirkadda Samsung. Bilooyin badan oo xan iyo xogo badan kadib, Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay noocyada cusub ee Galaxy S10, kala duwanaansho ka kooban seddex terminaal, S10e oo ah aaladda gelitaanka illaa dhamaadka sare ee had iyo jeer mataleysa Samsung S.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, tirada xanta la xiriirta Galaxy S10 ayaa si aad ah u kordhay, taas oo noo oggolaatay inaan helno fikrad cad oo cad oo ku saabsan noocyada cusub ee S10 ee shirkadda Kuuriya ay soo bandhigtay daqiiqado yar ka hor. Laakiin dabcan, waxay ahaayeen xan. Hadaad rabto inaad ogaato waxaas oo dhan Noocyada 'Galaxy S10', qiimaha iyo astaamaha Hoos ayaan ku tusi doonaa.
1 Samsung waligeed maya maya maya maya
2 Sawirka faraha faraha shaashadda hoosteeda
3 Seddex kamaradood oo waalan ayaa sidoo kale imanaya S10
4 Awood u tudhin
5 Batariga maalinta oo dhan iyo in ka badan
6 Qiimaha iyo helitaanka Samsung Galaxy S10
Samsung waligeed maya maya maya maya
Samsung wuxuu ka mid ahaa soo saarayaasha tirada yar ee ayaa iska caabiyey u janjeedha ku dhowaad dhammaan soo-saareyaasha inay nuqul ka sameeyaan darajada kaas oo ka yimid gacanta iPhone X, oo ah xog ku saabsan in Android uusan u maleyneynin wax horumar ah oo hirgeliyay tiknoolajiyada lagama maarmaanka u ah in lagu furo qalabka iyada oo loo marayo tiknoolajiyad la mid ah Aqoonsiga Face, taas oo ah ujeeddada kaliya ee suntaas dusha sare ee shaashadda, maadaama ay ku jiraan dareemayaal iyo kamarado kala duwan.
Samsung waxay dooratay inay abuurto nidaam shaashad cusub oo dhan ah, abuurista nooc jasiirado ah ayaa ah shaashadda si loo dhigo kaamirada / s hore iyo sidoo kale nooc kale oo shaashad ah oo leh qaab ilmo ah qaybta dhexe ee sare. Lwuxuu heystaa S10 cusub wuxuu na siinayaa naqshad shaashad leh jasiirad, meesha ay kamaraddu / yaashu ku yaalliin oo bixinaya natiijo aad u soo jiidasho badan oo soo jiidasho leh marka loo eego haddii qaddarka la isticmaali lahaa.
Shaashadda qaabka aasaasiga ah, Galaxy S10e, wuxuu na siinayaa cabbir ballaadhan oo 5,8 inji ah, halka Galaxy S10 iyo S10 + ay isku darayaan shaashad wareegsan oo 6,1 iyo 6,4 inji ah. Haddii aan tixgelinno in Samsung ay tahay soosaaraha ugu weyn ee shaashadaha OLED ee suuqa, waxaan shaki ku jirin in shaashadani ay yihiin kuwa ugu wanaagsan suuqa taleefannada, iyagoo na siinaya midabbo cad oo daran oo aan si dhib leh uga heli karno boosteejooyinka kale.
Sawirka faraha faraha shaashadda hoosteeda
In kasta oo dib-u-dhig ka sii badan kuwa isticmaala Samsung ay jeclaan lahaayeen, haddana heerka Galaxy S10 ayaa bixiya Xiinka sawirka faraha Ultrasonic shaashadda hoosteeda, si aan toos ugu furi karno terminal-ka adoo taabanaya qeyb ka mid ah shaashadda xawaare aad u la mid ah kan laga helay dareemaha caadiga ah ee ku yaal dhabarka qalabka. Intaa waxaa dheer, ka duwan dareeraha indhaha, midka ultrasonic wuxuu shaqeeyaa xitaa haddii aan ku jirno jawi qoyan.
Marka lagu daro dareeraha faraha, Samsung waxay sii wadaa inay sharad ku gasho nidaamka aqoonsiga iris, nidaam aan na siineynin isla amniga ay teknoolojiyadda aqoonsiga 3D na siin karto, sida kan ay bixiso Apple ee Face ID-ka, laakiin taasi si weyn ayey ugu guuleysatay taageerayaasha shirkadda.
Seddex kamaradood oo waalan ayaa sidoo kale imanaya S10
Sida laga soo xigtay kuwa wax ka yaqaan sawir qaadista, kaamirooyinka badan ee aaladaha moobaylka ay dhexgalaan, ayaa ka sii fiican. Wanaagsan, ilaa iyo inta ay taageereyso softiweer awood u leh in si wada jir ah isla markiibana loo farsameeyo qabashada ay sameeyeen mid kasta oo kaamirooyinka ah. Dareenkan, Samsung waxay isticmaashaa Sirdoonka Artifishalka si loo gaaro natiijooyin aad u wanaagsan.
sidaas darteed Galaxy S10 iyo Galaxy S10 + ayaa seddex kamarad xaga dambe naga siiya, saddex kamaradood oo ujeedadoodu gabi ahaanba ka duwan tahay: telephoto, xagal ballaadhan iyo xagal ballaadhan oo ballaadhan, oo aan ku leenahay awood aan ku heli karno dhinacyo kale oo aan ka heli karno gegooyinka kale ee leh laba kamarad oo keliya.
Sidaan kor kusoo sheegay, Samsung waxay qaadatay shaashadda Infinity O, oo ah shaashad bixisa jasiirad ama daloolinta midigta kore ee shaashadda. Labada Galaxy S10e iyo Galaxy S10 labaduba waxay isku daraan hal kamarad oo ku taal dhinaca hore, halka Galaxy S10 + ay isku darayaan laba kamaradood, midkood oo leh qoto dheer RGB oo noo oggolaan doonta inaan sawir iska qaadno oo aan mugdi galino asalka sawirrada aan qaadanno. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku darno taxaneyaal miirayaal ah ka hor inta aan sawirka la qaadin si aan u aragno waxa natiijadu noqon doonto.
Awood u tudhin
Mar labaad, iyo sidii caadada u ahayd heshiiskii ay la xidheen Samsung, Galaxy S10 wuxuu noqonayaa terminal-kii ugu horreeyay ee suuq ku gaadha processor-kii ugu dambeeyay ee Qualcomm, Snapdragon 855, in kasta Waxay ku sameyn doontaa oo kaliya wadamada caadiga ah sida Mareykanka, Latin Amerika iyo Aasiya.
Dalalka intiisa kale, oo ay ku jiraan Yurub oo dhan, waa inaan u degno Exynos 9820, processor oo jiil kasta oo cusub, si weyn u kordhiya waxqabadkiisa, isagoo inta badan ixtiraam la mid ah kan ay bixiso Qualcomm Snapdragon ee u dhiganta.
Galaxy S10e waxaa lagu heli karaa hal nooc oo ah 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah.
Nooca dhexdhexaadka ah, Galaxy S10, si loo qalajiyo, ayaa laga heli karaa gudaha laba nooc oo ah 128 iyo 512 GB oo keyd ah, oo ay weheliyaan 6 iyo 8 GB oo RAM ah siday u kala horreeyaan.
Nooca ugu sarreeya ee kala duwan, Galaxy S10 + waxaa lagu heli karaa saddex nooc. Nooc leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah, mid kalena oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 512 GB oo keyd ah iyo nooca ugu qaalisan, oo na siinaya 12 GB oo RAM ah iyo 1 TB oo keyd ah.
Ma aha noocyada oo dhan waxaa laga heli karaa laga bilaabo maanta, sidaa darteed haddii aan dooneyno inaan doorto nooc gaar ah, waa inaan sugnaa sugitaanka si loo ballaariyo.
Batariga maalinta oo dhan iyo in ka badan
Batariga ayaa sii ahaanaya mid ka mid dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta taleefannada casriga ah maanta. Ilaa iyo inta Google iyo Apple labaduba aysan diiradda saarin hagaajinta isticmaalka kheyraadka nidaamyadooda hawlgalka, waa nalagu qasbi doonaa inaan maalin walba lacag ka qaadno. Galaxy S10e waxay na siisaa 3.100 mAh batari, halka Galaxy S10 iyo Galaxy S10 + ay na siinayaan 3.400 mAh iyo batari 4.100 mAh siday u kala horreeyaan.
Mid ka mid ah kuwa gaarka ah ee ay bixiyaan labada Galaxy S10 iyo S10 + ayaa laga helaa - Nidaamka lacag bixinta dib ugu noqo nidaamka Qi, taas oo noo oggolaaneysa inaan ka qaadno wixii taleefan kale ee casriga ah ama qalab la jaan qaadaya nidaamkan lacag-bixinta, oo ah hawl ku habboon marka aan ka baxno guriga oo aan ogaanno inaan ku dhejinnay dhagaha dhagaha ama in taleefanka casriga ah ee wehelkayagu uu yahay mid bilaa bateri ah ka hor inta uusan ku dhex lumin mall u dhigma.
Qiimaha iyo helitaanka Samsung Galaxy S10
Saddexda moodel ee cusub ee qayb ka ah Galaxy S10 ayaa la sii dayn doonaa 8-da Maarso, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan ku keydin karnaa bogga. Qiimaha mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah moodooyinka ku jira xadka 'Galaxy S10' ayaa lagu faahfaahiyay hoos:
Samsung Galaxy S10e - 6 GB RAM iyo 128 GB kaydinta: 759 euro
Samsung Galaxy S10 - 6 GB RAM iyo 128 GB kaydinta: 909 euro
Samsung Galaxy S10 + - 8 GB RAM iyo 512 GB kaydinta: 1.259 euro
Samsung Galaxy S10 + - 12 GB RAM iyo 1 TB keyd ah: 1.609 euro.
Dhammaan kuwa adeegsada Samsung Galaxy S10 ama S10 +, way awoodi doonaan bilaash ku hel Galaxy Buds oo midabkiisu cad yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Samsung Galaxy S10 hadda waa rasmi: wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku ogaato fiidiyoow
Pocophone F1 ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku ciyaarto waxyaabaha ku jira Netflix
Sony Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus: Sony dhex dhexaadkiisa cusub (Video)